पासवर्ड बिना सजिलै यसरि खोल्न मिल्छ अरुको फेसबुक, हेर्नुहोस ! – Online Marg
Posted on Monday, January 20th, 2020 10:53 PM Monday, January 20th, 2020 11:01 PM by अनलाइनमार्ग डट कम डेस्क
तपाईंले आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड आफूलाई मात्र थाहा छ, म मात्र खोल्न सक्छु भन्ने धारणा पाल्नुभएको छ भने तपाई गलत धारणामा हुनुहुन्छ । तपाईं बाहेक पनि अरु कोहीले तपाईंको फेसबुक खोल्न सक्छन् ।
हो, यो सत्य कुरा हो । यस्ता केही मानिस छन् जसले जो कोहीको पनि फेसबुक अकाउण्ट बिना कुनै पासवर्ड खोलिदिन सक्छन् ।
आखिर को होलान् त ती मानिस ? कतै ह्याकर त होइनन् ? त्यसोभए त फेसबुक निकै असुरक्षित भयो भन्नुहोला । त्यसो पनि होइन, यी मानिसका कारण तपाईंको फेसबुक असुरक्षित होइन बरु अझै बढि सुरक्षित हुन्छ ।
फेसबुक प्रयोगकर्ताको सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गर्नका लागि आफ्ना केही कर्मचारीहरुलाई फेसबुकले यस्तो अधिकार तथा सुविधा दिएको हो ।
फेसबुकले के स्पष्ट गरेको छ भने कर्मचारीलाई दिइएको यस्तो सुविधाबाट कुनैपनि फेसबुक प्रयोगकर्ताको गोपनियतामा भने कुनै खालको खतरा उत्पन्न हुनेछैन ।
निश्चित काम पुरा गरुन्जेलका लागि फेसबुकले आफ्ना कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा दिन लागेको हो ।
फेसबुक विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय सोसल नेटवर्किङ्ग प्लाटफर्म हो । विश्वका करोडौँ मानिसहरु फेसबुकको माध्यमबाट आफ्ना साथी तथा परिवारसँग जोडिइरहेका छन् ।
तथापि पछिल्लो केही समय यता डाटा लिक तथा ह्याकिङ्गका घटनाले फेसबुकको सेक्योरिटी तथा प्राइभेसी नीतिमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । अनि प्रयोगकर्ताहरुले फेसबुकमा आफ्नो सुरक्षा र गोपनियतालाई लिएर चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
यस्ता टूल्सको प्रयोग गरी प्रयोगकर्ताले फेसबुक अकाउन्टबाट डाटा लिक हुने तथा ह्याकिङ्ग हुने जोखिमबाट बच्न सक्दछन् । फेसबुकका सेफ्टी टूल्स के के छन् र त्यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ रु केही टिप्स यस्ता छन्ः
न्यूज फिडलाई पर्सनलाइज्ड गर्नुहोस्ः यसको सहायताले तपाइँले आखिर किन तपाइँको फेसबुकमा कुनै खास प्रकारका पोष्टहरु मात्र धेरै देखिन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ ।
फेसबुकले यस्ता पोष्ट कम गर्नका लागि केही शर्टकट्स दिएको हुन्छ । त्यसको प्रयोग गरी प्रयोग गरी प्रयोगकर्ताले आफ्नो न्यूजफिडलाई आफ्नो मनपर्ने पोस्टका लागि पर्सनलाइज्ड गर्न सक्दछन् ।
फेसबुक डाटा म्यानेज गर्नुहोस्ः यो नयाँ प्राइभेसी शर्टकटमा प्रयोगकर्तालाई एउटा मेन्यू प्राप्त हुन्छ । त्यहाँ ट्याप गरी प्रयोगकर्ताले आफ्नो डाटा नियन्त्रण गर्न सक्छन् । साथै नयाँ शर्टकटले प्रयोगकर्ताको डाटालाई कसरी कन्ट्रोल गर्दछ भन्ने कुरा पनि फेसबुकले जानकारी दिन्छ ।
फेसबुकमा प्रयोगकर्ताले अग्रीम रुपमा कन्ट्रोल अप्सन प्राप्त गर्न थालेका छन् । जहाँ प्रयोगकर्ताले फेसबुकले कसरी र कहाँ आफ्नो डाटाको प्रयोग गर्न पाउँदछ भन्ने कुरा तय गर्न सक्दछन् । प्रयोगकर्ताले आफ्नो लोकेसन डाटालाई म्यानेज गर्नुका साथै फेसबुकमा अपलोड हुने सामाग्रीहरु, फेस रिकग्नीसन सेटिंग, तथा एड प्रेफरेन्स जस्ता विषय पनि म्यानेज गर्न सक्दछन् ।
लगइनका लागि टू फ्याक्टर अथेन्टिकेसनः फेसबुकले प्रयोगकर्ताका लागि एक विशेष खालको सेक्योरिटी फिचर ल्याएको छ, जसबाट तपाइँले पासवर्डका अलावा पनि फेसबुकको अकाउन्टलाई अझै सुरक्षित बनाउन सक्नुहुनछ ।
रिपोर्ट एब्युजः यो फिचरका माध्यमले प्रयोगकर्ताले गत फोटो, भिडियो तथा पोस्टका विषयमा फेसबुकमा रिपोर्ट गर्न सक्दछन् । जब फेसबुकमा कुनै पोष्टको बारेमा उजुरी आउँदछ, तब फेसबुकले त्यसलाई समीक्षा गर्दछ ।
प्राइभेट कन्भर्सेसनः फेसबुकले हालै आफ्नो मोबाइल तथा डेस्कटप एपमा ग्रुप बेस्ड कम्युनिकेसनलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि केही परिवर्तन ल्याएको छ ।
एपको केन्द्रमा माथिल्लो भागमा एउटा ग्रुप ट्याबको अप्सन छ । त्यसको सहयोगले ग्रुपको सामाग्री तपाइँको न्यूज फिडमा पहिले भन्दा धेरै देखिनेछ । साथै फेसबुक प्रयोगकर्तालाई नयाँ ग्रुप खोज्न तथा त्यसमा सहभागी गराउने विषयमा पनि सुझाव दिन्छ । –एजेन्सीको सहयोगमा
कुन-कुन देशमा फेसबुकु चलाउन पाइदैन ?
अहिले सामाजिक सञ्‍जाल ुफेसबुकु विश्‍वभरी नै चर्चित छ। फेसबुकको माग दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। तर चर्चित फेसबुक पनि केही देशहरुमा चलाउन भने प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कुन कुन देशमा फेसबुकलाई प्रतिबन्ध गरिएको छ त रु
सन् २०१०देखि सामाजिक सञ्‍जाल ुफेसबुकु पेजमा पैगम्बर मुहम्मदलाई दुर्दशामा अवस्थामा रहेको भनेर कार्टून पोस्ट भेटियो। यसपछि उक्त तस्बिर भाइरल हुँदै धेरै विवाद निम्त्यायो र पाकिस्तान सरकारले दुई हप्ता फेसबुकलाई बन्द गर्नु पर्यो भने पछि देशमै नै प्रतिबन्ध लगाउनु पर्‍यो।
फेसबुक धेरै चलाउनुहन्छ ? मानसिक रोगी हुनु होला
कुनै कुनै साथी भएका मान्छेहरु प्रभावशाली र क्षमतावान हुन्छन्। केही खास गुण वा विशिष्टता भएका मान्छेहरुसँग केही आइडिया साझेदारी गर्न मन लाग्छ तर त्यस्ता मान्छेहरुलाई फेसबुकमा बहस गर्ने समय हुँदैन। औसत मान्छेसँग समय प्रशस्त हुन्छ तर उनीहरुसँग केही पाउन सकिदैन। मेरो अनुभव हो यो। कुनै मान्छेसँग प्रत्यक्ष भेट नभई वा चिनजान नभई उनीहरुको म्यासेज रिप्लाई गर्न मान्छेको भलाद्मीपनले पनि अलि दिदैँन। म पनि त्यस्तै हुँ। सबैको म्यासेजको रिप्लाई लेख्दिन। अरुले मेरो पनि लेख्दैनन्। यस्तो फ्रेन्डसिपको सम्बन्ध केको लागि रु सबै मान्छे आफ्नै आफ्नै काममा। आफ्नै आफ्नै तनावमा। घरबाहिर निस्केर भेट्ने यसो घुमघाम गर्दै सुख दुख साट्नुमा जो आनन्द छ त्यो फेसबुकको पर्दाभित्रका साथीको अनुहार हेरेर बस्नुमा कहाँ छ। ओठमा हाँस्नु र स्टिकरमा हाँस्नु धेरै फरक कुरा हो।
मलाई लाग्छ अहिलेको फेसबुकमा धेरै समय बिताउने मान्छेहरु एक एक पत्रकार हुन्। आलोचक पनि हुन्। समाज सुधारक हुन्। बुद्धिजीवि हुन्। तर उनीहरुको कामले न समाज न कुनै व्यक्ति कसैलाई राम्रो फाइदा गरेको छैन। भूमिका जसले अरु केहीगर्न नसकेपनि आफूलाई क्षण क्षणमा अपडेट गरिराखेका हुन्छन्। कसलाई रुखा लागेको छ। कसले कुन होटलमा बसेर के खाँदै छःरु कसको घरमा के तरकारी पाकेको छ। कसले आज श्रीमतिसँग एनिभर्सरी मनाइरहेको छ सब कुरा थाहा पाउन सकिन्छ।
खाना खादै गरेको अवस्था आयो चुठ्दै गरको अवस्था आउन बाँकी छ। साँझ सुत्दै गरेको अवस्था पनि देखियो त्यो पनि अचम्म नमानौँ मस्तसँग निदाइरहेको अवस्था पनि देखियो। बिहान उठ्दै गरेको अवस्था पनि देखियो प्रभु अब उठेर वाथरुममा गएर के के गर्दै गरेको अवस्था पनि देखिने हो कहिले देखि। अस्पतालमा बिरामी भएर भर्ना भएको बेलामा पनि आफ्नो अवस्था नदेखाई भा छैन मान्छेलाई। श्रीमती सिटिस्क्यान मेसिन भित्र हुँदा पनि श्रीमान्लाई फोटो खिचेर माइ स्विट हार्ट इन सिटिस्क्यान क्याप्सन फेसबुकमा नहाली नहुने यो कस्तो माया हो रु
कुनै नयाँ ठाउँमा गयो एउटा फोटो टाँसेर थाहा दिइहाल्नु परेको छ मान्छेलाई। धन्न ससुराली र माइत गएको फोटो प्रत्येक पटक हाल्दैनन् मान्छेहरु अरुले के भन्लान् भनेर। नयाँ कपडा शरीरले र फेसबुकले एकै पटक लगाउछन्। अहिले को होला नयाँ कपडा लगाएर ऐना हेरिसकेपछि फेसबुकमा फोटो नहाली बाहिर केटी मान्छे रु अनि कतै केही मिठो खाने कुरा मुखमा हाल्नुभन्दा पहिला फेसबुकमा नहाल्ने मान्छे रु पहिला चोखामिठो खाँदा भगवानलाई चढाउने परम्परा थियो अहिले फेसबुकमा चढाउने परम्परा बसेको छ। चन्द्रागिरीमा म म र धोबीखोलाको छेउमा पानीपुरी खाएको फोटो राख्न त छोडेको छैन मान्छेले भने अरु के छोड्ला रु
अब समय यस्तो बिरामी मान्छेलाई फेसबुकमा स्याउ सुन्तलाको फोटो राखिदिएर गेट वेल सुन भनिदिए पुग्छ। बिरामीलाई कहाँ छ कुन अस्पतालमा छ भनेर खोज्ने र भेट्ने फुर्सद कसलाई होस्रु कोही चिनेको मान्छे मरेको फोटो फेसबुकमा देखिए एउटा दाउरा र रिप कमेन्ट बक्समा राखिदिएर मलामीको कर्तव्य पुरा हुन्छ। मान्छे मान्छेबीचको आत्मीयता शुन्य प्रायः भइसक्यो। कतिपय त रिडिङ् बुक भनेर क्याप्स्न वा फोटो राख्छन् अनि आएका कमेन्टहरुको रिप्लाई पनि दिइरहेका हुन्छन् बाफ रे कस्तो दिमाग हो यतातिर फेसबुक उता तिर अर्को बुक धमाधम दिइराछ। तर ती मान्छेको जहिले पनि रिडिङ बुक भन्ने स्टाटस र फोटो हेरियो तर त्यो बुकमा खास के रहेछ र पढ्नुपर्ने कारण के रैछ कहिलै पढ्न पाइएन। उनीहरुले पनि लेख्न भ्याएनन्। पढिरहको अवस्था अपडेट गर्दा गर्दै।
यस्तो कमेन्टलाई धन्यवाद कसरी नदिनूरु
कसैले त मलाई भन्छन् खै मेरो फोटोमा लाइक कमेन्ट केही छैनरु
के मान्छेलाई फेसबुकमा राख्न आफ्नो फोटो बाहेक अरु केही हुँदैन रु कुनै विषयमा विचार वा चिन्तन हुँदैन रु कुनै महत्वपूर्ण सुचना र जानकारी हुँदैन रु
सोच्नुपर्ने कुरा यो हो की हाम्रा प्रत्येक संवाद, कसैसँग नांगिएको शरीर कुनै पनि गोप्य छैनन्। जुनसुकै बेला आफ्नो विश्वासको पात्र या कुनै ह्याकरको हातमा ती सबै कुरा पर्न सक्छन्। वा कसैले हाम्रो नामबाट कुनै त्यस्तो अश्लिल सामग्री पोस्ट गरिदन सक्छ। अनुहार हाम्रो र शरीर अर्कैको जोडेर हामीलाई नांगो बनाइदिन सक्छ। एउटा बाबुले आफ्नी किशोरी छोरीको नांगो तसबीर फेसबुकमा देख्यो भने उसलाई बाँच्ने शक्ति केले दिन्छ रु त्यो किसोरी कसरी बाँच्न सक्छे रु
त्यो काण्डमा मुछिएका जो कोही मान्छे तपाईँ हामी पनि हुन सक्छौँ हाम्रो शीर कसरी ठाडो हुन सक्छ रु केही नभएपनि केही समय त हामीलाई मानसिक आघात पुर्याउछ नै। के थाहा त्यो आघात जिन्दगीभर निको नहुने रोग पनि त हुन सक्छ।
Posted in विज्ञान, प्रविधि तथा शिक्षा मार्ग
हामी सबैले युट्युबबाट पैसा कमाई हुन्छ भन्ने कुरा त सुनिरहेकै विषय
नेपाली युवाले बनाए चकित पार्ने एप, अब तपाईलाई चाहिने सबै एप्स एउटै एपबाट चलाउनुहोस् !